Listings in စက်ယန္တရားကြီးများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ) | Mandalay Directory | Myanmar Business Directory | Advertise in Mandalay | Mandalay Yellow Pages
Listings in စက်ယန္တရားကြီးများ and ဘဏ်များ (အစိုးရ)
Aung Emerald Co.,Ltd. [Multi-Parts]
၄၁လမ်း၊ ၅၁လမ်း နှင့် ၅၂လမ်း ကြား၊ ရဲမွန်တောင်၊, ,
09-785000004 , 09-256377752
in ကားရောင်းဝယ် တင်သွင်းသူများ, ကား၊ ထရပ်အသစ် ရောင်းချသူများ, ကားအပိုပစ္စည်းဆိုင်, ကားပြုပြင်ရေးလုပ်ငန်းများ, ဆောက်လုပ်ရေး၊ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ, စက်ယန္တရားကြီးများ
Aung Kan Bo Truck & Machinery Co.,Ltd.
အမှတ် ဂျီ-၅/ဘီ၊ ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်း၊ ယောမင်းကြီးလမ်း ထောင့်၊ စက်မှုဇုန်(၁)၊ ဈ-ရပ်ကွက်၊, ,
09-43133322 , 09-43133313
09-43133322, 09-43133313, 09-444027722, 09-444027733, 09-796135675, 09-444027711
in ဆောက်လုပ်ရေး၊ကန်ထရိုက်တာ လုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ, ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများ, စက်ယန္တရားကြီးများ
Aung Shwe Htoo Win Construction & Transportation Co.,Ltd.
အမှတ် ယ-၁/၅၅၊ မြဝတီမင်းကြီးလမ်၊ လမ်းသွယ်(၃) ၊ က-ရပ်ကွက်၊, ,
02-4080491 , 09-960090184
02-4080491, 09-960090184, 09-961068346, 09-5167992
in စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းသုံးစက်နှင့် ပစ္စည်းကိရိယာများ, စက်ယန္တရားကြီးများ, ဆန်စက်နှင့် အပိုပစ္စည်းရောင်းဝယ်ရေး
အမှတ် ဃ-၃၊ အောင်သပြေလမ်း၊ ဘုရင့်နောင်ပွဲရုံ၊, ,
01-3680410 , 01-3683441
01-3680410, 01-3683441, 09-49210530, 09-49517053